Ndị na-eweta ngwaahịa na ụlọ ọrụ - ndị na-emepụta ngwaahịa China
Ìhè na-atụgharị ụgbọ ala...
1W-3W-5W Aluminom PCB maka L...
Custom Metal Core PCB maka m ...
HDI PCB dị mgbagwoju anya maka ...
Automobile Reversing Light PCB nrụpụta maka akara ama ama na China.
Ndị PCB ndị a agbanweela ụzọ anyị si akwọ ụgbọala na iji ụgbọ ala anyị, site na njikwa injin na ihe mmetụta ikuku na njikwa mgbochi mkpọchi yana ọbụna nkwado GPS, yana akụkụ ọkụ n'ezie.Fọrọ nke nta ka ọ dị mma n'oge a n'ime ụgbọ ala n'okporo ụzọ gị ma ọ bụ ụgbọ mmiri dị n'ogige azụmahịa gị dabere na PCB ụgbọ ala.
Thermal management Bibiri Circuit Board (PCB) -SinkPAD TM
SinkPAD bụa thermal management Printed Circuit Board (PCB) technologynke ahụ na-eme ka o kwe omume iduzi okpomọkụ site na LED na n'ime ikuku ngwa ngwa na nke ọma karịa MCPCB nkịtị.SinkPAD na-enye arụmọrụ okpomọkụ dị elu maka ọkụ ọkụ ọkụ dị elu ruo elu.
1W-3W-5W Aluminom PCB maka oriọna ọkụ
Aluminom PCB, nke a makwaara dị ka Aluminom Clad ma ọ bụ Thermally Conductive PCB, bụ PCB pụrụ iche nke nwere ihe na-eduzi thermally na-ekpo ọkụ na ọkụ eletrik.
A na-eji mkpụrụ osisi plastik ma ọ bụ eriri fiber eme ihe na-eme PCB mgbe niile, Otú ọ dị, n'ihe banyere Aluminom PCB, a na-eji mkpụrụ ígwè eme ihe;ihe kpatara ya na-ezokwa ya dị ka metal base PCB.
Ọnụ ego na-arụ ọrụ na okpomọkụ dị elu bụ ihe na-eme ka mbadamba ndị a pụta ìhè na usoro nke mbadamba sekit ndị ọzọ.
Custom Metal Core PCB maka otutu ngwa
A Metal Core Printed Circuit Board (MPCCB), makwaara dị ka PCB thermal ma ọ bụ metal kwadoro PCB, bụ ụdị PCB nke nwere ihe igwe dị ka ntọala ya maka akụkụ mgbasa ọkụ nke osisi.Igwe dị arọ (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ aluminom ma ọ bụ ọla kọpa) na-ekpuchi akụkụ 1 nke PCB.Metal isi nwere ike na-ezo aka na metal, ịbụ ma n'etiti ebe ma ọ bụ na azụ nke osisi.Ebumnuche nke isi nke MCPCB bụ ibugharị okpomọkụ pụọ na akụkụ bọọdụ dị oke mkpa yana mpaghara ndị na-adịchaghị mkpa dị ka nkwado heatsink metal ma ọ bụ isi ọla.A na-eji ọla ndị dị na MCPCB eme ihe dị ka ihe ọzọ na bọọdụ FR4 ma ọ bụ CEM3.
FR4 Tg180 ENIG emechara yana mkpịsị aka ọla edo (na-achịkwa mgbochi)
Mkpịsị aka ọla edo
A na-achịkwa ihe mgbochi
Na-eli & kpuru vias
Aluminom isi dị ọnụ ala laminated ọla kọpa foil SinkPAD PCB
Kedu ihe bụ Thermoelectric Separation Substrate?
The sekit n'ígwé na thermal pad na mkpụrụ na-kewapụrụ, na thermal isi nke thermal components na-akpọtụrụ ndị na-eduzi okpomọkụ ozugbo iji nweta mmetụta kachasị mma nke thermal conductive (zero thermal resistance).Ihe nke ihe eji eme ihe bụ n'ozuzu metal (ọla kọpa) substrate.
123456Ọzọ >>> Peeji nke 1/10
© Copyright Welldone Electronics Ltd. 20212022 : Ikike niile echekwabara.